CIN Khabar पर्यटकीय सम्भावना बोकेको 'रुवी भ्याली' र अध्ययनको आश्वासन
सीआईएन शुक्रबार, जेठ ३१, २०७६, ०१:५०:००
काठमाडौँ । नेपाल भ्रमणमा आउने बहुसङ्ख्यक पर्यटकको प्राथमिकता हिमालय पर्वत पर्न थालेपछि सरकारले पर्वतीय पर्यटनको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गर्ने भएको छ ।
हिमाली क्षेत्रमा पर्यटक आकर्षित गर्न सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र प्रवर्धनको काम एकसाथ अगाडि बढाउन अध्ययनको तयारी गरेको हो ।
पर्वतीय पर्यटनका निम्ति आवश्यक जनशक्ति उत्पादनदेखि अन्तराष्ट्रिय विशिष्ट पाहुनालाई समेत हिमाल चढाउन मिल्ने ‘माउण्टेन हब’ निर्माण गर्दा अन्तराष्ट्रियस्तरमा विशिष्ट पहिचान हुने विश्वासका साथ उपयुक्त स्थानको छनोट गर्न लागिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले चाहेजस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्न उपयुक्त स्थान काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिकको दुरीमा रहेको रुवी भ्यालीस्थित गणेश हिमाल शृङ्खला अन्तर्गत पाल्दोर हिमालको आधार शिविर र पाङसाङ पासमा रहेको धादिङ क्षेत्र नम्बर २ का सांसद खेमप्रसाद लोहनीले बताउनुभयो ।
पाल्दोर आधार शिविर र पाङसाङ पासमा हालै नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको संयोजनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उच्च पदाधिकारीद्वारा स्थलगत अवलोकन गरिसकिएको छ ।
यही जेठ १ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. कँडेल नेतृत्वको टोलीले रुवी भ्यालीको पाङसाङ पास र पाल्दोर आधार शिविर पुगेर स्थलगत निरिक्षण गरेको हो । अध्ययन भ्रमणमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पर्यटन हेर्ने सदस्य डा. रामकुमार फुयाल, धादिङ क्षेत्र नम्बर २ का सांसद खेमप्रसाद लोहनी, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका महासचिव कुलबहादुर गुरुङ लगायतको सहभागिता थियो ।
पर्यटनमार्फत नै आर्थिक समृद्धि र विश्व समुदायको ध्यान खिच्न सक्ने उपयुक्त परियोजनाको खोजी गर्दा राजधानीबाट सबैभन्दा नजिक र छिटो सम्पन्न गर्न सकिने यो स्थान छनोटमा पर्न सक्ने देखिएको छ ।
भ्रमणबाट फर्किएपछि उपाध्यक्ष कँडेलले पर्यटनमार्फत समृद्धि हासिल गर्न यस्ता परियोजनाको खोज अनुसन्धान हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उपाध्यक्ष कँडेलले भन्नुभयो “प्रारम्भिक चरणको अध्ययनमा पाल्दोर आधार शिविर राजधानीबाट नजिक रहेको र उपयुक्त लोकेशनमा रहेकोले अगाडि बढाउन उपयुक्त देखिएको छ ।” राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा यस्ता परियोजना छनोट हुने भएकाले यसै वर्ष विस्तृत अध्ययन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पाङसाङबाट अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, मनाशलु, गणेश, लाङटाङ, गौरीशङ्करलगायत श्रृङ्खला नजिकबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ । काठमाडौंबाट धादिङबेसी हुँदै दुई दिनमा पुग्न सकिने स्थानमा रसुवाको स्याफ्रुबेसीहुँदै एकै दिनमा मोटर चढेर पुग्न सकिन्छ । हेलिकप्टरमार्फत १८ मिनेटमै पुगिने स्थान स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ ।
स्थलगत निरिक्षण गरेर फर्कनुभएका राष्ट्रिय योजना आयोगका पर्यटन हेर्ने सदस्य डा. रामकुमार फुयालले राष्ट्रिय महत्व बोकेको राम्रा परियोजनाको खोजी गर्ने क्रममा पाल्दोर पिक पनि एउटा सम्भावनाले युक्त देखिएको बताउनुभयो ।
नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ र ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन नेपालले यसअघि पाल्दोर पिकमा माउण्टेन हट निर्माण गर्न विभिन्न दातृ निकायसँग सहकार्य गरेर प्रारम्भिक अध्ययन गरेका थिए । सोही अध्ययनका आधारमा सांसद लोहनी र नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको मागका आधारमा सरकाले बजेट समेत विनियोजन गरेको छ ।
योजना आयोगका उपाध्यक्षा डा पुष्प कँडेललगायत अवलोकनमा सहभागीहरु ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ३१, २०७६, ०१:५०:००